Izindaba - Ukuhlaziywa kwesimo sokuthuthukiswa kwemakethe kwemboni yokukhiqiza imithwalo ngo-2020
Ukuhlaziywa kwesimo sokuthuthukiswa kwemakethe kwemboni yokukhiqiza imithwalo ngo-2020
Iqhutshwa yintuthuko yezomnotho yomhlaba kanye nokufunwa kwezimakethe, imboni yemithwalo yezwe lami ithuthuke ngokushesha kule minyaka eyishumi edlule, futhi ukwanda kwesidingo semakethe kulethe izinkampani eziningi zemithwalo emzileni wentuthuko esheshayo. Ngokombono wemodeli yebhizinisi, imodeli yebhizinisi lemakethe yezimpahla zasekhaya ikakhulukazi i-ODM / i-OEM, futhi uchungechunge lwezimboni lugxile kuzesekeli ezikhuphukayo nasendaweni yokuqala. Ngokombono wezinga lokuthengisa embonini, imali engenayo yokuthengisa yezinkampani zemithwalo eziqokiwe ngo-2019 yayingu-141.905 billion yuan, ukwehla konyaka ngonyaka ngo-1.66%. Ngokombono wosayizi wemakethe yemithwalo, imakethe yezwe lami yezwe ngo-2019 ingama-yuan angama-253 billion, ukwanda kwama-22.64% unyaka nonyaka, kanti nezinga lokukhula liphambi komhlaba wonke. Ngokombono wokuthuthukiswa kwesifunda kwemboni, imboni yemithwalo yaseChina ithuthuke kakhulu ezifundazweni ezisogwini zaseGuangdong, eFujian, eZhejiang, eShandong, eShanghai, eJiangsu, nasezweni laseHebei naseHunan. Umkhakha wemithwalo manje ususungule amaqoqo e-Huadu, Guangdong, Industrial Industrial ePinghu, Zhejiang naseBaigou, Hebei.
I-China ingumkhiqizi omkhulu wemithwalo, ikakhulukazi i-ODM / i-OEM
Impahla iyithuluzi lokugcina imithwalo elisetshenziswa kakhulu ekuhambeni kwethu kwansuku zonke. Iqhutshwa yintuthuko yezomnotho yomhlaba kanye nokufunwa kwezimakethe, imboni yemithwalo yezwe lami ithuthuke ngokushesha kule minyaka eyishumi edlule. Isidingo esikhulayo semakethe silethe iningi lezinkampani zemithwalo emzileni osheshayo weNtuthuko. Imboni yemithwalo yaseChina ibuse umhlaba, hhayi kuphela isikhungo sokukhiqiza somhlaba wonke, kodwa futhi nemakethe enkulu yabathengi emhlabeni. Njengomkhiqizi ohamba phambili wemithwalo nezikhwama, iChina inezinkulungwane zabakhiqizi bemithwalo futhi ikhiqiza cishe ingxenye eyodwa kwezintathu zemithwalo nezikhwama zomhlaba, futhi isabelo sayo semakethe asinakubukelwa phansi.
Ngokombono wemodeli yebhizinisi, imakethe yemithwalo yasekhaya incintisana kakhulu, imodeli yebhizinisi ikakhulukazi i-ODM / i-OEM, futhi iketango lezimboni ligxile kuzesekeli ezikhuphukayo nasendaweni yokuqala. Abadlali abakhulu bemakethe embonini yokukhiqiza imithwalo yezwe lami bacubungula abakhiqizi, abakhiqizi abangochwepheshe nabasebenza opharetha. Njengamanje, iningi lamabhizinisi emithwalo nezikhwama ezweni lami ligxile ekucubunguleni abakhiqizi. Amabhizinisi anjalo ngokuvamile mancane ngesilinganiso futhi makhulu ngesibalo, ngenani eliphansi lemikhiqizo kanye nomncintiswano omkhulu wemakethe. Abakhiqizi abangochwepheshe bakhulu ngesilinganiso, banamakhono athile we-R & D nokuklama, futhi bagcina nemikhiqizo yabo yomkhiqizo. Ama-opharetha womkhiqizo wempahla ikakhulukazi avela phesheya, akwazi i-R & D, izixhumanisi zedizayini nezokuthengisa ezinamamaki enzuzo omkhiqizo aphakeme kakhulu.
Ukuthuthukiswa okusheshayo kwemakethe, izinga lokukhula elihola umhlaba
Ngokombono wemali yokuthengisa embonini, umthwalo ungomunye wemikhakha engaphansi yomkhakha omkhulu wesikhumba. Ngokuya ngemininingwane ekhishwe yi-China Leather Association, kuze kube sekupheleni konyaka we-2018, bekukhona izinkampani zemithwalo eziyi-1,598 ezweni lami, ngenzuzo engenayo yokuthengisa engama-yuan ayizigidi eziyizinkulungwane ezingama-150.694, ukwanda konyaka ngo-2.98%. Ku-2019, imali engenayo yokuthengisa yezinkampani zemithwalo ngaphansi kwemithethonqubo yayingu-141.905 billion yuan, ukwehla konyaka ngonyaka ngo-1.66%.
Ngokombono wesilinganiso sonke somkhakha wemithwalo, imakethe yezwe lami inkulu futhi ibisenkathini yokusheshisa okuqhubekayo eminyakeni yamuva. Ngokwezibalo ze-Euromonitor, kusuka ku-2012 kuya ku-2019, usayizi wemakethe wemboni yemithwalo yezwe lami ukhuphukile kusuka ku-130.2 billion yuan kuya ku-253 billion yuan, ngesilinganiso sonyaka sokukhula kwenhlanganisela engu-9.96%, okungaphambi kwezinga lokukhula komhlaba wonke.
Umthamo wokukhiqizwa kwemboni ubanzi, futhi amaqoqo ezimboni asobala
Ngokwengxenye yesifunda, imboni yemithwalo yaseChina ithuthuke kakhulu ezifundazweni ezisogwini zaseGuangdong, eFujian, eZhejiang, eShandong, eShanghai, eJiangsu, nasezweni laseHebei naseHunan. Njengomkhiqizi wemithwalo omkhulu kunabo bonke emhlabeni, imikhiqizo yemithwalo yaseChina ekhiqizwe yilezi zifundazwe eziyisishiyagalombili ibalelwa ngaphezu kwe-80% yesabelo semakethe yezwe. Ngokuphikisana okukhulu, ukuthuthukiswa komkhakha wemithwalo ezindaweni ezinkulu ezimaphakathi nasentshonalanga kusilela emuva kakhulu.
Ngokombono wezindawo zokukhiqiza, umthamo wokukhiqiza wasekhaya ugxile kakhulu emikhiqizweni emithathu emikhulu yemithwalo eqoqa izindawo zaseShiling eGuangdong Huadu, ePinghu eZhejiang, naseBaigou e-Hebei; ngasikhathi sinye kwazalwa izimakethe zobungcweti ezifana neHaining Leather City, iShanghai Hongkou Leather Center, neGuangzhou Leather City. . Lezi zindawo zokubutha zibalwa cishe ngama-70% wenani lokuphuma kwemithwalo yezwe lami.
Imininingwane engenhla ivela ku- "China Bag Manufacturing Industry Production and Demand Demand and Investment Forecast Analysis Report" yiQianzhan Industry Research Institute. Ngasikhathi sinye, iQianzhan Industry Research Institute inikeza izixazululo zedatha enkulu yezimboni, ukuhlelwa kwezimboni, isimemezelo sezimboni, ukuhlelwa kwepaki lezimboni, kanye nokukhuthaza ukutshalwa kwezimali ezimbonini.